The Rohingya News Bank : ရခိုင်အရေး
Showing posts with label ရခိုင်အရေး. Show all posts
မောင်တော ဘူးသီးတောင် ခွဲထွက်မယ် ဆိုတာ ကလေးက လား စကားတွေပါ
စာရေးဆရာ ဦးအောင်ခင် (စစ်တွေ)
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများနှင့် မွတ်စလင် ကျေးရွာသားတို့မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အရေးအခင်း ကာလ နောက်ပိုင်းကတည်းက ကူးလူး ဆက်ဆံမှု ပြတ်တောက်သွားပြီး နှစ်ဖက်စလုံး သံသယများဖြင့်သာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ခုနှစ် မောင်တောအရေးအခင်း ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်လည်း ရခိုင်တိုင်းရင်း သားများနှင့် မွတ်စလင်တို့မှာ ပို၍ပင် စည်းခြားသကဲ့သို့ ဆက်ဆံ သွားလာမှုများ မရှိကြတော့ပေ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်စစ်ပွဲ ကာလအတွင်း မွတ်စလင်များကဲ့သို့ ရခိုင်ကျေး ရွာ သားတို့မှာ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ခံရမှု၊ အိုးအိမ်များကို စွန့်ပစ်ကာ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး လူမျိုးန နှစ်မျိုးစလုံး ဒုက္ခပေါင်းမျိုးစုံ ခါးစည်းခံရကာ ထိုဖြစ်စဉ်များနောက်ပိုင်း နှစ်ဖက်လူမှုအသ်ိုင်းအဝိုင်းတွင်လည်း တစတစ ယခင်အတိုင်း ကူးလူးဆက်ဆံ လာမှုကို ပြန်လည် မြင်တွေ့ရသည်။
Labels: 2022, AA, mm, ULA, ဘူးသီးတောင်, ရခိုင်အရေး, မောင်တော
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ။ (အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇)
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း အာဆီယံနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသိင်္ဂီထိုက် စုစည်းတင်ပြထား ပါ တယ်။
မကြာခင်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဆိုရင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ပိုပြီး တိုး တက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ နောက် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ ဌာနေပြန်နိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က အာဆီယံ-ကုလသမဂ္ဂ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ တိုက်တွန်း သွားပါတယ်။ ရခိုင်ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးက အစိုးရ ဒုတိယသက်တမ်းမှာလည်း ဦးစားပေးကိစ္စအဖြစ် ဆက်ပြီး ရှိနေကြောင်း မြန်မာဘက်ကလည်း ကတိပြုခဲ့တာပါ။
Labels: 2020, ASEAN-UN, mm, ရခိုင်အရေး, သတင်း, ဆွေးနွေူ
ရခိုင်အရေး ICC ကို လွှဲပြောင်းပေးဖို့ AI အဖွဲ့ တောင်းဆို
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ် ဘုရားပေါင်းရွာနဲ့ တောင်ပေါက်ရွာ နှစ်ရွာကို မီးရှို့ပြီး အရပ်သားတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာ တပ်မတော်ရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ AI က စွပ်စွဲလိုက်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC က အရေး ယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီကို တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။
Labels: 2020, AI, mm, Video ICC, ရခိုင်အရေး, သတင်း
အွန်လိုင်း ဗွီဒီယိုကတဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး။ (စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၀)
အွန်လိုင်းဗွီဒီယိုကတဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၄ ရက်ကြာ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်း အေ ဝးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို တုံ့ပြန်တိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ အငြင်းပွားနေတဲ့ တောင် တ ရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ ကတိကဝတ် ပြုခဲ့ကြတဲ့အပြင် ကိုရီး ယားကျွန်းဆွယ် လုံခြုံရေး၊ မြန်မာက ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စ အပါအဝင် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိစ္စ၊ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇဝတ်မှုခင်း စတဲ့ ကိစ္စရပ် တော်တော်များများကိုလည်း ဆွေးနွေး ခဲ့တယ်လို့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Pham Binh Minh က ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, ASEAN, mm, နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး, ရခိုင်အရေး, သတင်း, ဆွေးနွေး
ရခိုင်အရေး ASEAN ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကုလအတွင်း ‌ရေးမှူးချုပ် ကြိုဆို
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ အာဆီယံ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာတာဟာ ကုလသမ ဂ္ဂအတွက် လွန်စွာအရေးပါတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် António Guterres က ပြောကြားလိုက်ပါ တယ်။
အာဆီယံ-ကုလသမဂ္ဂ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီကို မိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က အဲဒီလို ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါ နေရပ်စွန့်ခွာ သွားကြသူ တွေ နဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို နိုင်ငံတကာက ပူးပေါင်းအဖြေရှာရေးဟာ မရှိ မ ဖြစ် လိုအပ်ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ ထောက်ခံတင်ပြချက်တွေနဲ့အညီ အာဆီယံနဲ့ ကုလ သမဂ္ဂက ရှေ့တိုးဆောင်ရွက် သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။
Labels: 2020, Antonio Guterres, ASEAN, mm, ကုလ ကြိုဆို, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်အရေး, သတင်း
ရခိုင်အရေး ကုလကို ဘယ်လောက်ယုံကြည်လို့ရနိုင်မလဲ
ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်က သည်ဟိတ်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်တရားရုံး၌ တရားသူကြီးများကိုတွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - အီးပီအေ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူသိရှင်ကြား ဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ယင်းနေရပ်စွန့်ခွာသူများအရေး ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ ကြောင့် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် သည်ဟိတ်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး(ICJ)က မြန်မာ အစိုးရအား ကြားဖြတ်စီမံဆောင်ရွက်ချက်များ ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းသည် အံ့သြစရာတော့ သိပ်မရှိခဲ့ချေ။
Labels: 2020, mm, MMT, ကုလ, ရခိုင်အရေး, ဆောင်းပါး
ရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအပါအဝင် ရာဇဝတ်မှု တိုင်းကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ သမ္မတ ညွှန်ကြား
စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ညွှန်ကြား
ရခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ အပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုအားလုံးကို ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပါအဝင် သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနအားလုံးကို ပေးပို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကနေ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, ARSA, ICOE, mm, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်အရေး, ရာဇဝတ်မှု, သတင်း
ICOE နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာတွင် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု မခိုင်လုံကြောင်း ပါရှိ
ICOE အစီရင်ခံစာကို သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ထံ ပေးအပ်နေစဉ် / ဧရာဝတီ
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဆိုင်ရာ မြန်မာအစိုးရက ဖွဲ့စည်းထားသည့် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မ ရှင် (ICOE) ၏ နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံတကာက စွပ်စွဲနေသည့် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုများ ရှိ သည် ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ခိုင်လုံသော အထောက်အထား မတွေ့ရှိရဟု ပါရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်း အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ထံသို့ ကော်မရှင်က ယနေ့ ပေးအပ်လိုက်သည်။
Labels: 2020, ARSA, ICJ, ICOE, mm, ရခိုင်အရေး, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု, သတင်း, အစီရင်ခံစာ
ရခိုင်မှာ လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု အထောက်အထားမတွေ့ လို့ ICOE ထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက မူဆလင်များနဲ့ အခြားလူမှုအသိုင်းအဝန်းတွေ ရွှေ့ပြောင်းခံရမှုနဲ့ သတ်ဖြတ်ခံရ မှုတွေက ဖျက်ဆီးလိုတဲ့ ရယ်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ ကျူးလွန်းခဲ့တဲ့ သက်သေမျိုးကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူး
လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျူးလွန်မှုမျိုးအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ ကောက်ချက် ချနိုင်မှု တစုံတရာသက်သေ အထောက် အထားမျိုးကို အထောက်အထားစုဆောင်းခြင်းနဲ့ အတည်ပြုခြင်း ကော်မတီအနေနဲ့မတွေ့ရဘူးလို့ ရခိုင်အရေး လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ICOE ရဲ့ ထုတ် ပြန် ချက်မှာပါရှိပါတယ်။
Labels: 2020, ICOE, mm, ရခိုင်အရေး, လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မီရှင်, သတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေကို ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေးအတွက် တတ် နိုင် သလောက် ဆက်လက် ကူညီသွားမယ်လို့ တရုတ်ဘက်က ကတိပြုလိုက်သလို ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဘက် ရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေကို ပြန်လည်လက်ခံမယ်လို့ မြန်မာဘက်က ထပ်ပြီး ကတိပြုလိုက်ပါ တယ်။
Labels: 2020, mm, ကတိပြု, တရုတ်, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်အရေး, သတင်း, အကူအညီ
ရခိုင်အရေးကို လွဲမှားစွာပုံဖော်ထားသည့် တတိယကော် မတီ၏ အဆိုမူကြမ်း မြန်မာကန့်ကွက်
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခု၌ စစ်ဘေးရှောင်ရခိုင်ဒေသခံများအား ဇူလိုင် ၁၀ ရက်က ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စ ခရစ္စတင်း ရှရာနာ ဘူဂင်နာ ရောက်ရှိ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်။ ဓာတ်ပုံ- အီးပီအေ
ဒေသတွင်း မတူညီသည့် အသိုက်အဝန်းများအကြား နိုင်လိုမင်းထက် ပြုမှုနှင့် ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားမှုကိုသာ အားပေးအားမြှောက်ပြုမည့် အဆိုမူကြမ်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသ၏ ထိရှလွယ်သည့် ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် သဟ ဇာတဖြစ်ရေးအပြင် နေရပ်ပြန်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ဆုတ်ယုတ်ပျက်ပြားစေမည့်အပြင် နိုင်ငံတကာ အ သိုက်အဝန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများအကြား သဘောထား ပိုမိုကွဲလွဲစေမည့် အဆိုမူကြမ်းဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသည်။
Labels: 2019, mm, MMT, ကန့်ကွက်, ကုလ တတိယကော်မီတီ, ရခိုင်အရေး, အဆိုမူကြမ်း
DVB Debate:"နေရပ် စွန့်ခွာသူတွေ ဘယ်အခြေအေ န မှာ ပြန်လာမလဲ?" ( Part A,B,C )
DVB Debate:"နေရပ် စွန့်ခွာသူတွေ ဘယ်အခြေအနေမှာ ပြန်လာမလဲ?" (Part A )
DVB Debate:"နေရပ် စွန့်ခွာသူတွေ ဘယ်အခြေအနေမှာ ပြန်လာမလဲ?" (Part B )
DVB Debate:"နေရပ် စွန့်ခွာသူတွေ ဘယ်အခြေအနေမှာ ပြန်လာမလဲ?" (Part C )
Labels: 2019, DVB Debate, mm, Video, ရခိုင်အရေး, ဦးအေးလွင်, နေရပ်စွန့်ခွာ
တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ အမျိုးသားစ်ိတ်ဓါတ် နှင့် ပြည် ထောင် စုနိုင်ငံ ဖော်ဆောင်ရေး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားပြဿနာပြေလည်ရေး ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် သမိုင်းဖြစ် ရပ်တွေကို ထိန်ချန်မထားဘဲ၊ အဲဒီထဲကအမှားတွေကို ပြန်ပြင်နိုင်မယ့် စနစ်တရပ် လိုအပ်တယ်။ တိုင်းရင်း သားး တို့ရဲ့အမျိုးသားစိ်တ်ဓါတ်ကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ကိုင်တွယ်ပြီး၊ ဒီပြဿနာတွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့  နမူနာကို အတုယူသင့်တယ်လို့ အမရေိကန်ပြည်ထောင်စု Gerogetown တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ David Steinberg က ဆိုပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ပါမောက္ခ Steinberg နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
Labels: 2019, David Steinberg, mm, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်အရေး, ဦးကျော်ဇံသာ, မေးမြန်းခန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ IDP တွေအပေါ် ကန့်သတ်မှုတွေအ တွက် ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် စိတ်ပျက်
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ်အတွင်း အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ လည်း အဲဒီလူတွေရဲ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ကို အလွန်အကျွံကန့်သတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာ စိတ် ပျက် မိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener က ပြောလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, mm, ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်အရေး, သတင်း
အာဆီယံ၏ ရခိုင်အရေးချဉ်းကပ်မှု အကျိုးဖြစ်ထွန်း နိူင်မလား
Issue No.အတွဲ(၁၈)၊ အမှတ်(၁၇)
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တွင် ဇွန်လ ၂၃ ရက်က ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (ဓာတ်ပုံ − အီးပီအေ)
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပုိုင်းမှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အနောက်နုိုင်ငံများ၏ အမြင်နှင့် အာဆီယံ၏သဘောထားတုို့ သိသာစွာကွဲပြားနေသည် ကုို မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက် များ၌ ပေါ်လွင်နေ သည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်သည့် ဇွန်လနောက် ဆုံးပတ်တွင်ပြု လုပ်သော (၃၄)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအ စည်းအဝေးအပြီး ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြေ ညာချက်က အဆိုပါအေ ခြအနေ ကို သတိပြုမိစေသည်။
Labels: 2019, 7-Day, ASEAN, mm, ရခိုင်အရေး, သတင်း, ဆောင်းပါး